ट्वीटरमा आफ्नै नग्न तस्वीर देख्दा…
आफ्नो नग्न तस्वीर ट्वीटरको एकाउण्टमा देख्दा जोकोही पनि आत्तिन्छ । तेलेगु फिल्मकी अभिनेत्री अञ्जली द्विवेदी पनि आफ्नो नग्न तस्वीर सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा देख्दा निकै आत्तिईन् । कोही एक प्रयोगकर्ताले उनको तस्वीर फेक एकाउण्ट बनाएर...
कस्तो अचम्म ! आँखाम़ा पट्टि बाँधेर लिंग छामेर आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड चिन्नुपर्ने (भिडियोसहित)
विश्वमा अचम्मका प्रतियोगिताहरु हुन्छन्, त्यस्तैमध्ये एउटा प्रतियोगिता तपाईंलाई देखाउँदैछौं । जहाँ युवतीहरुले आंखामा पट्टि बाँधे लिंग छाम्दै आफ्ना ब्याइफ्रेन्डहरु चिन्नुपर्छ । कति युवतीहरुले लिंग छामेर आफ्ना ब्याइफ्रेण्ड चिने त कति झुक्किए । हेर्नुस यो...
सरकारसँग रिस उठेपछि मोडेलले नाँगो फोटो खिचाइन्
सरकारी निर्णयको विरुद्धमा एक अस्ट्रेलियन मोडलले नांगो भएर विरोध जनाएकी छन् । अडानी ग्रुपको प्रस्तावित १५ दशमलव ५ अर्ब डलरको कोइला खानी तथा रेलको ढाँचासम्बन्धी परियोजनालाई सरकारले मन्जुरी दिएको विरोधमा २५ वर्षीया मोडल रबिन...
दाङमा ठूलो झुण्डमा भेटियो सलह, मकै र धान बालीमा ठूलो क्षति
दाङमा वडाध्यक्षसहित थप २१ ज्नामा कोरोना, वडा कार्यालय सिल
नेकपा एमाले नामको नयाँ पार्टी दर्ताका लागि कसले हाल्यो निवेदन ?
उपत्यकामा थपिएका कोरोना संक्रमितमध्ये ४ मात्रै काठमाडौँका अन्य विदेशबाट फर्केका
सुदूरपश्चिममा थपिए ९६ जना कोरोना संक्रमित